နွေပူပူမှာ ကလေးတွေ မိတ်ထွက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ - Hello Sayarwon
ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ
နွေပူပူမှာ ကလေးတွေ မိတ်ထွက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win | ရေးသားသူ Yun Sandi Nan Mon
Update Date မေ 11, 2020 .2mins read
ရာသီဥတုက ပူလာပြီဆိုတော့ လူကြီးတွေတောင် အပူဒဏ်ကိုအံတုဖို့ အမျိုးမျိုးကြိုးစားရတာ ကလေးလေးတွေဆို ပိုဆိုးပြီပေါ့။ Hello ဆရာဝန်မှာ ခုတလောအမေးများလာတာကဘေဘီလေးတွေ မိတ်ပေါက်တာ ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာပါပဲ။နွေမှာ မိတ်ပေါက်တာ သဘာဝပဲဆိုပေမယ့် နုနယ်တဲ့ကလေးလေးမှာတော့မေမေတို့စိုးရိမ်ကြမှာသေချာတာပေါ့။
ဒါပေမယ့်မပူပါနဲ့။ ကလေးအရေပြားမှာ အဖုလေးတွေ အစုလိုက်ထွက်လာတာ အသည်းယားစရာ၊ မထိရက်စရာဖြစ်နေပေမယ့် ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ေနွရာသီအရေပြားပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ တစ်ခါတလေ ရည်ကြည်ဖုသေးသေးလေးတွေလိုဖြစ်နေမယ်၊ အနီဖုလေးတွေဖြစ်နေမယ်။ မိတ်ဖုထွက်ခြင်းက အသက်အရွယ်မရွေးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ အရာဖြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်မှာ အပူဒဏ်အရမ်းခံနေရတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ကြား၊ လည်ပင်းကြား၊ တံတောင်ဆစ်ကြားတို့လို ကလေးရဲ့ အရေပြားအတွန့်အခေါက်လေးတွေကြားမှာရော၊ ရင်ဘတ်၊ ဗိုက်၊ တင်ပါး တို့အပြင် ဦးရေပြားမှာပါ မိတ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့ခန္ဓါကိုယ်မှာချွေးဂလင်းတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချွေးတွေက အရေပြားမျက်နှာပြင်ထိ မထွက်လာတော့ဘဲချွေးငုပ်သွားပါတယ်။ မိတ်ဖုထွက်ခြင်းက ဒီအခြေအနေကို ခန္ဓါကိုယ်က တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ လက္ခဏာပါ။ မိတ်ထွက်တဲ့အခါ ကုတ်ချင်လာအောင် ယားတာ၊ စပ်တာလေးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့မိတ်ပေါက်လဲဆို အပူဒဏ်ခံရတာများလာလို့ပါ။ ကလေးတွေရဲ့အရေပြားမှာ လူကြီးတွေထက်ချွေးပေါက်ပိုကျဉ်းတာမို့လို့ မိတ်ပိုထွက်လွယ်ပါတယ်။
စိတ်ပူရတဲ့ရောဂါလက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးရဲ့ခန္ဓါကိုယ်မှာ ပူအိုက်နေတဲ့လက္ခဏာပါ။ ဒါပေမယ့် အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် ကလေးမှာဖြစ်လာတဲ့ တခြားလက္ခဏာတွေကိုတော့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
အေးအောင်ထားပါ – ချောင်ချောင်ချိချိအဝတ်အစားပဲဆင်ပေးပါ။အေးတဲ့နေရာမှာနေစေပါ။နေပူထဲခေါ်မသွားပါနဲ့။ကလေးကို အပူရှိန်တိုက်ရိုက်မထိအောင် အေးမြအောင်ထားပေးပါ။ အဲကွန်းသို့မဟုတ် ပန်ကာတော့ တိုက်ရိုက်မထိပါစေနဲ့။
မိတ်ဖုတွေကို မပေါက်ပါစေနဲ့ -ရေချိုးပြီးလို့ သုတ်ပေးရင်တောင် တဘက်နဲ့ပွတ်မသုတ်ပါနဲ့။ မိတ်ဖုလေးတွေပေါက်ပြဲကုန်ရင် ကလေးအရေပြားမှာ အဖတ်လန်တာ၊ အနာဖြစ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့မတိုင်ပင်ဘဲ တခြားလူးဆေးအဆီတွေ မလူးပါနဲ့။ ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားကို လေဝင်လေထွက် ထိတွေ့နိုင်အောင်ထားပါ – ကလေးအရေပြားကို တတ်နိုင်သလောက်လေနဲ့ထိတွေ့မှုများအောင် ထားပါ။ အဝတ်အစားပွပွဝတ်ပေးတာ၊ ပါးပါးဝတ်ပေးတာ၊ နူးညံ့တဲ့ချည်သားလေးတွေဝတ်ပေးတာမျိုး။
ကလေးလက်သည်းတွေ တိပေးထားပါ – လက်သည်းညှပ်ပေးထားလည်း လက်သည်းအစွန်းတွေ၊စောင်းတွေနဲ့ဆို ကလေးကမိတ်ယားလို့ကုတ်လိုက်ရင် အရေပြားပေါက်ပြဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လက်သည်းလေးတွေကို အဖျားတိပေးထားပါ။
တတ်နိုင်သလောက်အေးတဲ့နေရာမှာထားပါ။လေအေးပေးစက် ဒါမှမဟုတ် ပန်ကာကို ကလေးနဲ့ဦးတည်ချက်လွှဲပြီး အခန်းထဲအေးအောင်ထားပေးပါ။ အပြင်သွားရမယ်ဆိုရင်တောင် အရိပ်ရတဲ့နေရာမှာနေပါ။
နို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေဖြစ်ဖြစ် အသက်အရွယ်အလိုက် ကလေးကိုရေဓါတ်လုံလောက်အောင် တိုက်ကျွေးပါ။
လည်ပင်း၊ပေါင်ကြားတို့လို ကြားဧရိယာတွေမှာချွေးစို့၊ စိုစွတ်နေလေ့ရှိလို့အရေပြားမလောင်အောင် wet tissue လေးနဲ့ ဂရုတစိုက် တို့သုတ်ပေးပါ။ လိုအပ်လာရင်ရေအေးလေးနဲ့ဆေးကြောပေးပြီး သူ့ဘာသာခြောက်သွေ့အောင် လေသလပ်ထားပေးပါ။
ကလေးမှာ ပူအိုက်မှုလွန်ကဲနေလား မကြာမကြာစစ်ဆေးပေးပါ။ ကလေးအသားကို လက်နဲ့စမ်းကြည့်ပါ။ ပူနေလား၊ချွေးတွေထွက်နေလား သိရမှချွေးထွက်မလွန်အောင်တစ်မျိုး၊ချွေးငုပ်ပြီးပူနေရင်တစ်မျိုး လိုသလိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ ပူအိုက်ရင် ပန်ကာ သို့မဟုတ်လေအေးပေးစက်နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတဲ့နေရာမှာ ထားရပါမယ်။ ကလေးဆီကိုလေအေးလေးတွေဝေ့ဝိုက်ရောက်ရှိစေဖို့ပါ။ ဒါမှ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကလေးကိုအေးမြစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့အရေပြားပြဿနာက မိတ်ဟုတ်မဟုတ် မသေချာတော့ဘူးဆိုရင်၊ ဥပမာ ဖျားတာလိုမျိုး တခြားလက္ခဏာတွေဖြစ်လာရင်တော့ ဆရာဝန်ပြတာကောင်းပါတယ်။ မိတ်က ရက်အတော်ကြာလာတဲ့အထိမှေးမှိန်မလျော့သွားဘူးဆိုရင်၊ ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုရင် မိတ်မဟုတ်တဲ့ တခြားရောဂါတစ်ခုခုရဲ့လက္ခဏာဖြစ်နေနိုင်လို့ပါ။
Accessed Mar 14, 2019.
Heat Rash (မိတ်ထွက်ခြင်း)
နွေရာသီမှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် မိတ်ရောဂါ
နွေရာသီ မှာ အသားအရေလေးကို ဒီလိုဂရုစိုက်
နွေနေပူပူမှာ ကလေးကျန်းမာဖို့ မေမေတွေ ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ
မွေးကင်းစကလေးလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာများ
ကပ်ဘေးရဲ့ မွန်းကျပ်မှုတွေကို Hiking ထွက် ပြီး ဖြေဖျောက်ကြမလား
ခြေလျှင်ခရီးထွက်တာ တနည်း Hiking ထွက် တာဟာ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးကျေးဇူး အမြောက်အများပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ သင်ထင်မှတ်ထားတာတွေရော မထင်မှတ်ထားတာတွေရောပါ။
ကျန်းမာစေမည့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်တိုက်တွန်းခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2021 .2mins read
ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့ ခြင်းနှင့် ကျီးကန်းပါးစပ်
ခုလိုကာလမျိုးမှာ ကျီးကန်းပါးစပ်ဝေဒနာကို ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာဟာ ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့ မှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ လက္ခဏာတစ်မျိုးဆိုတာကိုတော့ လူသိနည်းပါတယ်။
အခြားခံတွင်းရောဂါ ပြဿနာများ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2021 .2mins read
တစ်နေကုန် နေပူထဲနေပြီးတဲ့အခါ ရေဓာတ်ပြည့်စေဖို့ ဘာတွေ စားမလဲ…….
တစ်နေကုန် နေပူထဲမှာ သွားလာရတယ်ဆိုရင် ရေသောက်ဖြစ်ဖို့က အခွင့်အလမ်း နည်းသွားသလို ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ကလည်း အတော်လေး ခက်ခဲ သွားနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အခြားအာဟာရဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2021 .2mins read
နေပူ ထဲမှာ အကြာကြီး လမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုရင် ဘာတွေသတိထားသင့်လဲ။
နေပူ ထဲမှာ ရေရှည်လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက် မလွယ်ပါဘူး။ သေချာဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် အိမ်ရောက်တာနဲ့ မှောက်ပြီး နောက်နေ့တွေ လျှောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခြေခံကျန်းမာရေး, အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 8, 2021 .2mins read
ဘေဘီလေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖရဲသီး စကျွေးမလဲ ……
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 13, 2021 .2mins read
ဘီးစပ်ရွက် က အခုလို ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 19, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မတ် 4, 2021 .2mins read
အခါးဓာတ်ပါတဲ့ အရာတွေက ဝက်ခြံကို သက်သာစေလား။
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မတ် 2, 2021 .2mins read